दिव्य साईदर्शनः एक अनुभव -लव जोशी
(१) मन भड्किदै छ । मुख सुकेको छ । जिब्रोले पटक -पटक ओंठ भिजाइ रहेको छु । मुटुको ढुकढुकी बढ्दो छ । खुट्टा लरबरिएको छ । दुईगोडा आपसमा ठोकिन्छन् । लड्नबाट झण्डै सम्हालिएँ । दुबैआँखा दायाँ-बायाँ, तल-माथि र अगाडि-पछाडि घुमिरहेक छन् । तर कमलालाई भेटाउन सकिएको छैन । कहाँ गई होला ? कता अल्मलिई ? शोचालयतिर जाँदा बाटो बिर्सी कि ? खुट्टा कमजोर छ ‘लडी कि ‘ भनी सोंच्छु । कसैले केही पो ग-यो कि भनी शंका गर्छु । किन एक्लै छाडेर टिकट काट्न गएँ हुंला भनेर आफैले आफैलाई कोस्छु । रातभरि हनहनी ज्वर आएको थियो,उसलाई । म पनि ज्वरले थलिएको थिए । निदाएकी छैन । मन उदिग्न छ । मनलाई सम्हाल्छु । धैर्य गर्न भन्छु । बाबाको धाममा केही अनर्थ हुनै सक्दैन । श्रद्धा सबुरी राख्नै पर्ने निश्चयमा पुग्छु । मनलाई काबुमा लिन्छु । भारतको महाराष्ट्रराज्यको नासिक जिल्लामा सन १८६६ मा स्थापित मनमाड रेलवे स्टेसन ठूलो छ । कमला कहाँ लोप भई । ज्यादै सजग भएर खोज्छु । पैंतालिस मिनट समय बित्यो । अब रेल पनि आईपुग्ने बेला भयो । के हुंला म , जीवनसंगिनी भेटिइनन् भने । मेरो शरीर पक्षघात भएसरह लल्याक- लुलुक भयो । हुन त गोरखपुरबाटै सेकेण्ड क्लासको टिकट रिजर्भ गरेर यात्रा थालेका थियौं । शिरडी पुग्न मनमाड रेलवे स्टेसनमा झरेका थियौं । शिरडीमा साईबाबाको र शृँगणापुरमा सुप्रसिद्ध शनिदेवको दर्शनगर्न लाग्ने समय मिलाएर मनमाडबाट हैदरावाद पुग्न शिकन्दरावादसम्मको टिकट पनि अग्रिम बुक थियो ।शिरडीमा हावापानी बदलिएको कारणले हामीलाई ज्वोर आयो । बिरामी प-यौं । शिरडी बस स्टपमा बस चढ्दा एउटी भिखारीनले कमलालाई धक्का दिई उनको नयाँ मोबाईल खोसेर भागिन् । यो दुःखको कुरा थियो । मनमाड पुगेर टिकट चेक गराउँदा शिकन्दरावाद जाने हाम्रो रेल त गएराति नै छुटीसकेको रहेछ ।काउण्टरको कर्मचारीले टिकटमा लेखेको समय देखायो । रेल छुट्ने समय ००ः १५ लेखिएको रहेछ । एक त बिरामी अर्को २४ घंटे समय गणनामा अक्षमता- अज्ञानताका कारण रेल छुटेको अनुभूत भयो । रातको समयलाई दिनको सम्झने ठूलै गलती भइहाल्यो ।त्यसैले पुनः टिकट काट्नु प-यो । खर्चलाई ध्यानमा राखेर साधारण श्रेणीको टिकट काटें । भाउन्न भएर आयो । पाईप समाएर खुइय सुस्केरा हाले । झ्याप्प आँखाले कमला प – र उभिईरहेकी देखें । “ कमला “ भनी चिच्याएँ । दौडेर च्याप्प पाखुरामा समाएँ ।
(२) “ कहाँ गएकी ? कत्ति खोजें? मन अत्तालियो, बेस्सरी , के के सोच आयो के के ?’ एकैपटक भने ।
“ कहीं पनि गएकी छैन । जहाँको तहीं छु । मान्छेहरुले फर्कि – फर्कि हेर्थे । दुईटी केटीहरूले हेरेका हेरै गरिरहे । खुट्टामा लाउने चप्पल दुबै हातमा लिएका थिए । केही पाएमा लिई टाप कस्ने जस्ता देखिन्थे । मैले पनि तिनीहरूलाई ठूल-ठूला आँखाले हेरें । त्यसपछि लागे आफ्नो बाटो । यी ब्याग रूंगी रहें । अबेर भएकोमा पीर लाग्यो । ल अब कता जाने नि ? ”
कमलालाई विशाल रेलवे प्लेटफर्मको मध्य भागमा छाडी टिकट काउन्टरमा गएको थिएँ । उनी पीर र डरले पहेंलो भएकी देखें । संगै-संगै हुनुपर्ने हामी दुबै । तर दुई दिन बिरामी हुनुको कारणबाट उनी अशक्त थिई । घुँडाको दुःखाइ बढेको थियो । धेरै बेर हिड्न र उभिन मिल्दैन। सक्दिन । यसैले उनलाई एक्लै प्लेटफर्ममा छाडेको थिएँ ।
सोधपूछ गरेर शिकन्दरावाद जाने रेल रोकिने – छुट्ने प्लेटफर्ममा पुग्यौं । रेल आउने समय अझै बाँकी थियो । कु-यौं । यात्रीहरूको भीड बाक्लो थियो । हामीमा आफ-आफै रेल चढ्न हिम्मत भएन । हामी बिसन्चो थियौं । हामीलाई कसैको भरपर्नु पर्ने भयो । उति नै बेला रातो ड्रेसमा एकजना कर्मचारी देखियो । बोलाचालीको भाषामा उनी ‘कुली‘ हुन् ।
“ भैया, सुनिए “ भनेर ईशारा गरी बोलाएँ ।
“ भीड ज्यादा है, हम दोनो बिमार भि हैं । हमे ट्रेन चढा दिजिए ।”
“ ठिक है, चढवा दुंगा, सीट भि मिल जायेगी । लेकिन एक सौ रूपया देने पडैंगे ।” उसले ज्याला बतायो ।
“ आपको मिल जाएगा । “ मैले पक्का गरें ।
केही समयपछि हैदरावाद जाने रेल आएर रोकियो ।सोंचेभन्दा बढी भिड जम्मा भयो । यात्रीहरू हुलाहुल गरेर एकले अर्कालाई ठेल्दै, काँधमा चढ्दै डब्बाभित्र पस्न थाले । कोही झ्यालबाट छिरे । हामी जिल्ल प-यौं । भीड अलिक घटेपछि हामीलाई मदत गर्ने कुलीले हाम्रो ब्यागआदि बोकेर “ रस्ता छोडो, रस्ता छोडो “ भन्दै अघि बढ्यो । रेलको कर्मचारीले बाटो मागेपछि यात्रीहरूले छाडदिंदा रहेछन् । भित्र पसेर दुई सीट छेक्यो , हाम्रो समान राख्यो । हामीलाई चढ्नमा पनि सघायो । सीटमा बसेपछि उसलाई एकसय ज्याला दिई विदा ग-यौं । धन्यवाद भन्यौं ।
(३) डब्बा- बोगी खचाखच भरियो। महिलापुरूष झण्डै बराबरैकै संख्यामा थिए । झण्डै आधाघंटाको प्रतिक्षापछि रेल छुट्यो – गुड्यो, ला—मो सिटी बजाउंदै । कमलालाई बेंन्चमा गोडा पसारेर सजिलोसंग बस्न लगाएं । उनको गोडा काखमा लिएर हल्का मिच्न थालें । केही आराम भएछ कि उनी ‘घुर-घुर’ गरी निदाइन् । निद्रा लागेपछि पीडा कमहुन्छ नै । मेरो आंखामा भने निद्रा परेन । कहिले आंखा चिम्लेर उनको गोडा मिच्थे । कहिले खोल्थें । सहयात्रीहरूलाई हेर्थें ।फेरि बन्द गर्थें । मीठो निद्रामा कमला सुतिन् ।एकजना सहयात्रीले हाम्रो यात्राबारे जिज्ञासा राखे । मैले काठमाण्डौंदेखि सिरडीसम्मको यात्रा, साईनाथ र शनिदेवको दर्शनपछि छोरालाई भेट्न हैदरावाद जान लागेकोबारे छोटकरीमा बताएं । निदाउने कोशिस गरें । मलाई निद्रा पटक्कै परेन । आँखा चिम्लिएर शान्त भएँ तर पनि मनमस्तिष्कमा अनेक तर्कबित्तर्क चलिरह्यो । यात्राको समयमा नसोंचेको सुखद र दु:खद क्षणहरू आउॅंदा रहेछन् भन्ने शिक्षा पाइयो । गोरखपुरमा वास बसेको होटलको म्यानेजरले ई-टिकट काट्नमा सहयोग ग-यो तर उसले अस्वाभाविक रूपमा धेरै कमिसन खायो । तीर्थाटनको समय भएकोले प्रतिवाद नगरी सहें । शिरडीमा मन्दिर नजिकै ट्रष्टले संचालन गरेको धर्मशालामा सजिलै कोठा उपलब्ध भयो । पोखराबाट साईदर्शन निमित्त आएका भाइ शिनी गुरूंगसंग परिचय भयो । हामीसंगै बसी साई- शनिदेवको दर्शनपछि मुम्बई गए । हामीलाई हरबखत सहयोग गरे,मित्र बने । एकजना सहृदयी भेटिए । यो पल पनि सुखद रह्यो । साईबाबाको दर्शनको अघिल्लो दिन बैंकबाट एकसय रूपियांको कुपन लिएर मन्दिरभित्रै डेढघंटामा भ्याइने सत्यनारायणको सामुहिक पूजामा सहभागी हुने सौभाग्य पाइयो । साईबाबाको दर्शनगर्न असंख्य भक्तजनहरूको लाईनमा उभिइरहंदा पूजारीबाजेले कमलालाई लाईनबाट झिकेर सोझै बाबाको प्रतिमाको सानिध्यमा पु-याई दिएर दर्शन- नमनगर्न यथेष्ट समय दिनु भयो । त्यो अवसर पनि अपूर्व थियो । मलाई पनि साईनाथको दर्शन गर्न प्रशस्त समय प्राप्त भयो । पूजारीलाई गुलाबको फूल चढाउन दिएँ । बाबाको पाउमा राखी दिनु भयो । नयनाभिराम दर्शन गरें । मनैले पूजें । आत्माले दर्शन गरें । शिरडी पावन तीर्थस्थल हो । ट्रष्टले संचालन गरेको क्यान्टिन र भोजनालयमा सस्तो दाममा स्तरीय चिया, खाजा र खाना थपी-थपी खान पाउँदा खर्च जोगिएको, भोजनार्थीहरूलाई एकदिन खानाको कुपन बाँड्न पाउँदाको आनन्द आदि अति नै सुखद अवसर थिए । प्राकृत शनिदेवको प्रतिमामा तेल अर्पण गरी कमलाको गोडा निको होस् भनी प्रार्थना गर्दा र शनि औंठी किन्न पाउँदा पाएको खुसी अमूल्य थियो ।
(४) मिलेसम्म समूहमा यात्रागर्नु सुरक्षित भइन्छ । परदेशको यात्रामा श्रीमान-श्रीमती या अन्य नाताका पनि कुनै हालतमा नछुटिइ संगै हिड्नु पर्छ । कमलालाई केही भईदिएको भए मैले के भोग्नु पर्थ्यो ? मन उडेको उड्यै भयो । पानीको मूल फुटेझैं मनमा विचार फुरिरहेको थियो । यत्तिकैमा निधारको आज्ञाचक्रमा फकिरको वेषमा साईबाबाले दर्शन दिनु भयो । शीरमा दाहिने हातले आशिर्वाद दिनुभयो । झलझली हेरिरहेको थिएँ । बिना कुनै हलचल । शालिक झैं । अवाक । निःशब्द । किंकर्तव्यबिमूढ थिएँ । साईबाबा लोप हुनुभयो । यो क्षण कल्पनातित थियो । अलौकिक र दिव्य थियो । कमलालाई झकझकाएर उठाऐं ।
“ के भयो ? ”
“ मैले साई बाबाको दर्शन पाएँ ।आज्ञाचक्रमा प्रकट हुनुभयो । शीरमा हात राखी आशिर्वाद दिनुभयो । हिजो मैले मन्दिर – प्रागणमा साईबाबाको भेषमा एकजना बाबा देखें । उहाँलाई दक्षिणा दिएको थिएँ । उहाँले हात उचाली आशीष दिनु भएको थियो । उहाँले नै अहिले कुदीरहेको रेलमा दर्शन दिनु भयो । अहिले मलाई अनुभूति भयो कि हिजो मन्दिर परिसरमा हामीले एक्लो मात्र देखेका फकिर उनै साईबाबा रहेछन् । सन्ध्याबेलामा त्यत्रो ठूलो मन्दिर हातामा उहां मात्र हुनुहुन्थ्यो । उहांलाई फकिर मात्रै ठाने । मैले प्रणाम पनि गरिन ।साईनाथले हिजो नै हामीलाई साक्षात दर्शन दिनु भएको थियो । हामीले बुझेनौ । हाम्रो सामान्य चर्मचछुले साईबाबालाई चिन्न सकेनौं ।”
यत्ति के भनेको थिए, उनले साईबाबालाई हात जोडी नमन गरिहालिन् । मैले पनि नमन गरें । कल्पना नै नगरेको अनुभूति पाएँ । हाम्रो गतिविधि नियालीरहेका सहयात्रीहरूले हाम्रो हावभाव बुझेर साई बाबालाई नमन गरे ।
भन्न थाले – “ आपलोगौंको बाबा का दर्शन मीला न ? ” ट्रेन मे यात्रीयौं को बाबाका दर्शन मिल्नेका कहानी सुना था । आज आपलोगौंको दर्शन मिला । आपलोग लक्की हो ।”
तीर्थाटनको क्रममा यस्तो अनुभव भएको थिएन । पीडा भोगिरहेको मनले शान्ति पायो । शितलता पायो । साईबाबाको न्यानो दर्शन र आशीष पाइयो । मन प्रफुल्ल – प्रसन्न भयो । शिरडी साइनाथको चरणमा हाम्रो प्रीति लागी रहोस् । ॐ साईराम ! ॐ साईराम !! ॐ साइराम !!! ( २०६९ मा शिरडी साईबाबाको दर्शन गर्न जांदाको अनुभव ।
December 31, 2021 11:55 pm | Ads, ट्रेन्डिङ, विचार/ब्लग, विविध